Tuesday May 05, 2020 - 12:25:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaalida ee Kenya gummeysato ayaa sheegaya in xayiraad lagusoo rogay suuqyada ganacsiga magaalada Gaarisa.
Amar kasoo baxay dowladda Kenya ayaa lagu xiray suuqa xoolaha magaalada Gaarisa oo halbowle u ahaa dhaqaalaha gobolka, saraakiisha Kenya oo ku andacoonaya xakamaynta cudurka Carona Virus ayaa xiray suuqan oo muhiim u ahaa bulshada.
Ganacsatada xoolaha gobolka Gaaris ayaa tallaabadan cambaareeyay waxayna sheegeen in ay tahay mid halis gelinaysa nolosha kumanaan kun oo ku tiirsanaa waxa ay ka shaqeystaan suuqa xoolaha.
Dhinaca kale Kenya ayaa xayiraad kusoo rogtay xerada qaxootiga Dhadhaab ee dhulka NFD halkaas oo ay ku xayiranyihiin boqolaal kun oo qaxooti soomaaliyeed ah, booliska Kenya ayaa joojiyay dhammaan gaadiidkii raashinka udaabuli jiray xeryadaha dhadhahaab iyo Kaakuma.
Qaar kamid ah hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Dhadhaab ayaa warbaahinta u sheegay in xaalad adag ay wajahayaan "cudurka ay dowladdu leedahay waan ka hor tagaynaa waxaa nooga daran baahida iyo duruufta nagasoo gaaraysa xayiraadda nala saaray" sidaas waxaa yiri qof ku sugan Dhadhaab.